အရောင်ခြယ်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်း - ဗဟုသုတပေါင်းစပ်ထားသော - Modelarski Świat
စံပြကမ္ဘာ ခြယ်ပစ္စည်း ရာသီဥတုမော်ဒယ်များ 2017-09-16 | 4
ငါအရင် post မှာပြသခဲ့သည် ငါးပိများကိုပွတ်တိုက်ခြင်းဖြင့်မည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သနည်း ဝယ်ယူပြီးဖုန်မှုန့်အကြားခြားနားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော့်အမြင်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ငါနောက်ခံပုံများနှင့်ငါတို့ရရှိနိုင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများပေါ်တွင်ခြယ်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါလိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်သည်မော်ဒယ်ကိုစွဲမြဲစွာဆေးသုတ်ပြီးပါက၊ ထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင်၎င်းသည်အများအားဖြင့်လှပသောကစားစရာနှင့်တူလိမ့်မည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်စစ်ရေးအသုံးအဆောင်များသည်လုပ်ငန်းနယ်မြေကြောင့်အလွန်လျင်မြန်စွာနှင့်ပြင်းထန်စွာ သူတို့ပြောင်းရွှေ့သည့်နေရာများမှဖုန်များနှင့်ဖုံးလွှမ်းဖြစ်လာသည်။
၎င်းသည်ခြောက်သွေ့ပါကအစိုင်အခဲအလွှာဖြစ်လိမ့်မည်။ စိုစွတ်လျှင်သတ္တုပေါ်တွင်ရွှံ့များ၊ အစွန်းအထင်းများနှင့်သံချေးများဖြစ်သွားနိုင်သည်။ အင်ဂျင်တော်တော်များများကကန်တယ်၊ ဒါကြောင့်အခိုးအငွေ့တွေစုပုံလာပြီးခူကောင်တွေကဖုန်တွေများလာတယ်။
ခြယ်ပစ္စည်းအသုံးပြုခြင်း တစ် ဦး Matte မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာပြုအပေါင်းတို့နှင့်အမျိုးအစားကုသမှုရမည်ဖြစ်သည် washအဖုံးများကိုဖုန်မကပ်မီပြုလုပ်သင့်သည်၊ သို့မှသာသင်အခြားမည်သည့်အရာများပြင်ဆင်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းသေချာစေပါ။ မော်ဒယ်ပြီးဆုံးပြီးကူရှင်ချုပ်သည့်အခါ၎င်းကိုရှင်းလင်းသောအရောင်တင်ဆီဖြင့်ကာကွယ်ပါ Matteထိုကဲ့သို့သောရေမှုန်ရေမွှားသို့မဟုတ် airbrush အဖြစ်၎င်း, တစ်နေ့သို့မဟုတ်နှစ်ခုအဘို့လုံးဝခြောက်သွေ့ဖို့ခွင့်ပြုပါ။ ၎င်းသည် Matte ဖြစ်ရန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တောက်ပသောမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသောဆိုးဆေးများသည်၎င်းကို ကပ်၍ မရသည့်အပြင်ရှင်းပစ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ခြယ်ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုပြီးနောက်သင်ကအရောင်တင်ဆီနှင့်မဖြန်းဘဲ၊ မရော၊ အရောင်ခြယ်။ သော်လည်းကောင်း (စိုစွတ်သောရွှံ့ မှလွဲ၍ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များ) ကိုမဖြန်းပါနှင့်။ အရောင်တင်ဆီကိုအရောင်တင်ခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်၎င်းကိုလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေနိုင်သည်၊ ပို၍ မှေးမှိန်သွားစေနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် ပို၍ ဆိုးသည်မှာ၎င်း၏အရောင်များကိုလုံးဝပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ သို့သော်ကြီးမားသောမီးလောင်ရာမျက်နှာပြင်များပြုလုပ်ရန်အနက်ရောင်နက်သောမျက်နှာပြင်များပြုလုပ်ရာတွင်အရောင်ဖျော့ဖျော့အမှုန့်ပေါ်သို့ဖျာဖြန်းခြင်းသည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည် - ပြာအရောင်မှေးမှိန်ခြင်း၊ အောက်ပါဗီဒီယိုတွင်မြင်နိုင်သည်။
အသုံးပြုသည့်အခါမော်ဒယ်ထဲသို့ဖုန်မှုန့်သို့မဟုတ်ဖုန်မှုန့်အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းများကိုကူးထည့်ပါ ဟောင်းဖြီးကွန်တိန်နာမှတိုက်ရိုက်, ထို့နောက်ပိုလျှံထွက်ခွာသွားသောဖုန်မှုန့်ကိုပယ်လှုပ်။ နောက်ထပ်နည်းလမ်းမှာအကြမ်းအားဖြင့် ၂: ၁ ကိုသင်အနည်းငယ်ညစ်ပတ်စေသောအရည်တစ်ခုရရှိစေရန်ဆေးရည်ကိုအပင်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်စွမ်းအားဖြင့်ရောစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါအရောအနှောနိမ့်ဆုံးဖြစ်နိုင်သောဖိအားမှာ airbrush သုံးပြီးလျှောက်ထားသည်။ ခြောက်သွေ့ပြီးခိုင်မာသောဖြီးဖြင့်ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်အဆစ်များ၏ခြားနားချက်ကိုဖုန်မှုန့်များနှင့်သုတ်လိမ်းပါ။
ညစ်ညမ်းသောအရောင်များ၊ အညိုရောင်နှင့်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်သံချေးဖြင့်ညစ်ညမ်းစေခြင်း၊ ရေ (သို့) အရည်များတွင်အရည်ပျော်အောင်ပြုလုပ်ပါ။ မြွေ) နှင့်ဤအချိန်, တစ် ဦး ချွန်သောဖြီးသုံးပြီးအစွန်းအထင်းပုံမှန်အစည်းအဝေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူအစွန်းအထင်းဆေးသုတ်, ဒါမှမဟုတ်အင်ဂျင်သို့မဟုတ်လောင်စာဆီတိုင်ကီပေါ်တွင်ဥပမာရွေးချယ်ထားသောနေရာများအပေါ်ကိုငါသွန်းလောင်း။
သို့သော်၎င်းတို့သည်အစွန်းအထင်းများပြုလုပ်ရာတွင်ပိုမိုလူကြိုက်များသည် အစွန်းအထင်းအောင်အဘို့အအဆင်သင့်လုပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ ကြွေထည်သို့မဟုတ်ရေဆေးသုတ်ဆေးများပေါ်တွင်အခြေခံသော်လည်းသင်ကခြယ်ပစ္စည်းနှင့်အလုပ်လုပ်ရန် ပို၍ အဆင်ပြေလိမ့်မည်။
ဒီနေရာမှာခြယ်ပစ္စည်းပြိုင်ဘက်ကင်းဖြစ်ကြသည်။ ထို့နောက်အညိုရောင်အရောင်များကိုခြယ်သထားသည့်နေရာများသို့ပိုမိုထူထဲသို့မဟုတ်ပါးလွှာသောလွှာထဲသို့လောင်းပါ တစ် ဦး ဖြီးကိုသုံးပါစလစ်ကပ်ပြီးကမ္ဘာ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖန်တီးရန်စိန်ပင်တစ်စက်ကစာသားအတိုင်းဖြစ်သည်။ အချို့လူများကဒီရည်ရွယ်ချက်အတွက်အသုံးပြုရန်ကြိုက်တတ်တဲ့ မျက်လုံးစက်စက် ဆေးဆိုင်ကနေ။
ရွှံ့တွေပိုလိုအပ်ရင်အကောင်းဆုံး အင်္ဂတေနှင့်ခြယ်ပစ္စည်းရောမွှေပါ (သို့မဟုတ်အိတ်များနှင့်ပုံးများတွင်အသင့်ပြုလုပ်ထားသောအင်္ဂတေများကိုပြုလုပ်ရန်အကြံပေးသည်၊ ၎င်းသည်အင်္ဂတေပင်ဖြစ်နိုင်သည်) သို့မဟုတ် putty ကိုမော်ဒယ်လ်ဖြင့်မော်ဒယ်တွင်ကျယ်။ ခိုင်မာသော brush ဖြင့်မော်ဒယ်ကိုစုတ်တံဖြင့်အသာပုတ်ခြင်းဖြင့် - စုတ်တံကိုပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် perpendicular မျက်နှာပြင်။ ပိုကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိဖို့အတွက်သကြားခြောက်သွေ့တဲ့အင်္ဂတေဖုန်တွေ၊ သဲကောင်းကောင်းတွေ၊ အပင်သေးသေးလေးတွေထည့်ဖို့ငါအကြံပေးလိုတယ်။
ဤအမှု၌, ဥပမာအားဖြင့်, gypsum putty နှင့်အတူရောနှောရသောမှောင်မိုက်အညိုရောင်, မြေသားခြယ်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုပါ။ အဓိကဆက်စပ်ပစ္စည်းမှာရွှံ့ခြောက်နှင့်မတူဘဲ တောက်ပအရောင်တင်ဆီအရာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောအနှောသက်ဆိုင်ပါသည်။
သုတ်ထားသောအင်္ဂတေကိုမော်ဒယ်ပေါ်တိုက်ရိုက်အရောင် တင်၍ အရောင်တင်ရန်အရောင်တင်နိုင်သည်။ ကြမ်းခင်းအတွက် Sidolux သည်စျေးပေါ။ ကောင်းသောဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ကောင်းသောအနံ့နှင့်ဖြီးဖြင့်လွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်သည်။
ပို၍ ကောင်းသောကြည့်ရှုရန်အတွက်အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်စတိုးဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်သည့်ဥပမာအားဖြင့်ရောစပ်ခြင်းသို့သဲများကိုထပ်ဖြည့်သင့်သည် chinchillas များအတွက်သဲအဖြစ်နည်းနည်း electrostatic မြက်ကော်ဖီနှင့်ချုံဖုတ်မှရွက်လွှင့်သောအရွက်များကိုတုပသည့်ကော်ဖီနှင့်အပိုပစ္စည်းများလည်းကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်သင့်မီးဖိုချောင်သို့ကြည့်ရှုရန်နှင့် oregano, lovage စသည့်ကုန်တယ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုရှာဖွေရန်အကြံပြုလိုပါသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီအရာအားလုံးကိုသေးသေးလေးထဲမထည့်ခင်အင်္ဂတေနဲ့ခြယ်ပစ္စည်းနဲ့ရောစပ်သင့်တယ်။ ထိုကဲ့သို့သောလုယက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုငါပေးမည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွှံ့ကိုအလွန်လက်တွေ့ကြည့်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထူထဲသောရွှံ့ဖြင့်ဟောင်းသောတောင့်တင်းသောရွှံ့နှင့်တူအောင်၎င်းတို့ကိုပုံစံပေါ်တွင် perpendicularly နှိပ်၍ အထူလုံလောက်သည်အထိပြုလုပ်နိုင်သည်။
အဆုံးမှာကား၏ဘေးပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်ဘီးပတ် ၀ န်းကျင်ကိုညင်ညင်သာသာကြွယ်ဝစေခြင်းသည်ရွှံ့စုတ်၏ဆံပင်ကိုဤနေရာများသို့ညင်ညင်သာသာဖြန်း။ သော်လည်းကောင်း၊ ဤကဲ့သို့သောဆိုးဆေးလျှောက်ထားမော်တော်ယာဉ်သို့မဟုတ်တင့်ကားမော်ဒယ်ကိုရွှံ့ဖြင့်ဖြန်းနေသည်ဟုထင်မြင်စေရန်၊ ၎င်းသည်ညစ်ပတ်သောသေးသေးလေး၏သရုပ်မှန်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။
သံချေးတက်သောမျက်နှာပြင်များကိုပြန်လည်ထုတ်လွှင့်ခြင်း၏အလွန်လူကြိုက်များသောနည်းလမ်းမှာသံချေးရောင်ခြယ်ပစ္စည်းများကိုရွေးချယ်ထားသောနေရာများသို့ပွတ်တိုက်ခြင်းနှင့်အရည်ပျော်ရည်တစ်စက်ဖြင့်ပြုပြင်ခြင်း (စိန်ပင်ထက်ဓာတ်ဆီသို့မဟုတ်အဖြူရောင်စိတ်ဓာတ်ကိုအသုံးပြုခြင်း) ဖြစ်သည်။ ကောင်းပြီ၊ သင့်ကိုနက်ရှိုင်းစွာစားပြီးသံချေးစားသည်။
ဤနည်းစနစ်ဖြင့်၎င်းကိုအလွန်အကျွံလုပ်ရန်လွယ်ကူပြီးဥပမာအားဖြင့်သံချေးမွှေးသောအစားမွှေနှောက်သောအရာတစ်ခုကိုရနိုင်သည်။ ဒါဆိုထားကြစို့ "ခြယ်ပစ္စည်းသံချေး"သတိနဲ့ အဖြစ်မှန်၌အချို့သောဒြပ်စင်များကွဲပြားစွာသံချေးကြောင်းသတိရပါ။ သံချေးအသစ်အတွက်သုံးပါ အနီရောင်အရောင်များအဟောင်းအဘို့, ပင်မှောင်မိုက်အညိုရောင်သို့သွားသောအရိပ်။ ၎င်းအရောင်များကိုဒြပ်စင်တိုင်းတွင်အနည်းငယ် ခွဲခြား၍ ရောနှောခြင်းသည်အလွန်လက်တွေ့ကျသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပေးလိမ့်မည်။
MAtic အနက်ရောင်ခြယ်ပစ္စည်း။ ငါအထက်ပါဖို့ပြောင်းပြန် technique ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်တိတ်ဆိတ်နေသောအဆုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်တင့်ကား၏စည်ကိုထန်တိန်နှင့်နောက်ခြယ်ပစ္စည်းတွင်ထည့်သွင်းသင့်သည်။ ခြောက်သွေ့ပြီးနောက် အရမ်းညင်ညင်သာသာ မည်သည့်ပိုလျှံပယ်မှုတ်။ ဤနည်းအားဖြင့်ပေါ်လာရန်ရည်ရွယ်ထားသောအရာများပေါ်တွင်ကျပ်ခိုးဖန်တီးပါ အကြီးအကျယ် sooty။ အစွန်းအထင်းသေးသေးလေးများ၊ ဥပမာလေယာဉ်ပျံနှစ်ဖက်စလုံးတွင်ဆေးသုတ်ခြင်း၊ အနက်ရောင် airbrush ဖျာဖြင့်ခြယ်ခြင်းကပိုကောင်းသည်၊
သင်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် အသေးစိတ်အချက်အလက် အကျိုးသက်ရောက်မှုတစ်ခုစီအတွက်မည်သည့်အရောင်များကိုအသုံးပြုမည်ကိုရည်ညွန်းပါ ယခင်ဆောင်းပါး။ အရောင်အမည်များသည်တစ်လောကလုံးဖြစ်ပြီးအခြားပန်းချီနှင့်ပလတ်စတစ်ပစ္စည်းများအတွက်လည်းအသုံးပြုသည်။
ဆိုးဆေးနှင့်အတူရာသီဥတုနှင့်အတူအကြီးမားဆုံးပြproblemနာကသူတို့အဝတ်အစားမှကာကွယ်ပေးသည်။ သင်သည်သင်၏မော်ဒယ်များကိုအခါအားလျော်စွာကြည့်ရှုလို။ ၎င်းတို့ကိုသင်၏လက်ထဲတွင်ထည့်။ ပျော်ရွှင်မှုကိုမဆုံးရှုံးလိုပါက၎င်းင်းတို့ကိုခြယ်ပစ္စည်းများဖြင့်ချက်ခြင်းဖုန်မှုန့်ကိုမေ့ထားခြင်းဖြစ်သည်။ တောင်မှထင်ရသော ကောင်းစွာလုံခြုံသူတို့ဟာပွတ်သပ်မှုတစ်ခုစီနဲ့အတူပင်ပန်းနွမ်းနယ်နိုင်ပြီးအကာအကွယ်မဲ့နေလျှင်၊
ဘုရားသခင်နှင့်အမှန်တရားအကြား၎င်းတို့ကိုအရက်သောက်ခြင်းနှင့်ပါးလွှာသောအရာများဖြင့် ၀ ယ်ခြင်းသည်အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းများကိုထိန်းသိမ်းထားရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်အပေါ်ယံလုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုသာဖြစ်သည်။ သို့မှသာ၎င်းတို့သည်ပွင့်လင်းသောပြတင်းပေါက်မှလေပြင်းတိုက်ခြင်းကဲ့သို့သောသဘာဝအချက်များ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအောက်တွင်ပျောက်ကွယ်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုမထိတာအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်၊ အဝတ်လျှော်ခြင်းလည်းအလုပ်မလုပ်ဘူး၊ ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကဘာလဲ ဖန်ခွက်အမှု၌မော်ဒယ်ပိတ်...
ငါအောက်မှာတင်ပြပါလိမ့်မယ် လူကြိုက်အများဆုံး fixers မော်ဒယ်အတွက်အသုံးပြုကြသည်:
ယေဘုယျအားဖြင့် fixers / fixatives များသည်ဖြစ်နိုင်သမျှအင်အားအကြီးဆုံး binders ဖြစ်နိုင်သည်။ Fixative ဒါကြောင့်သိပ်သည်းသည်နှင့်ခက်ဖြီးချွတ်ပြေးလေကောင်းလေသန့်ဘုတ်ဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ရေမှုန်ရေမွှားဗားရှင်းများလည်းရှိသော်လည်းအလွန်မြင့်မားသောလေမှုတ်ရန်သင်သတိရရမည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ထိုဆိုးဆေးထဲမှာစိမ် အနည်းငယ်အရိပ်ကိုပြောင်းလဲပါ.
Fixatives များသည်တိကျစွာသဘာဝသို့မဟုတ်ဓာတုဗိုက်များဖြစ်သောအော်ဂဲနစ်အရည်များတွင်ပျော်ဝင်သည်။ Fixor ကို dioramas ဖန်တီးခြင်းအတွက်အဓိကအားအသုံးဝင်သည်အမျိုးမျိုးသောအမြောက်အများပစ္စည်းများအသုံးပြုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သည် ခိုင်မာတဲ့စာအုပ်ချုပ်သမားအရာ (ခြယ်ပစ္စည်းအပါအဝင်) အလွှာဆောင်ခဲ့ ဦး မည်။ လိုအပ်ပါကစိုစွတ်သောရွှံ့များကိုလဲကောင်းကောင်းကုသနိုင်သည်။
Do မော်ဒယ်ပေါ်ဆိုးဆေးပြုပြင်တာတွေ အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းကတော့ဒီအပ်နှံခြင်းကိုဝယ်ယူရန်ဖြစ်သည်၊ မော်ဒယ်လ်ဆိုင်များတွင်ရှိသည်။ခြယ်ပစ္စည်း fixers" ၄ င်းတို့သည်သုတ်ဆေးနှင့်အရောင်တင်ဆီများကိုမော်ဒယ်လ်တွင်အသုံးပြုရန်သင့်တော်သည်။ ၎င်းနှင့်ဆန့်ကျင်။ ပလတ်စတစ်အရောင်းဆိုင်များရှိပလပ်စတစ်စတိုးဆိုင်များတွင်ရရှိနိုင်သည့်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်မအကြံပြုပါ။ အများအားဖြင့်၎င်းတို့သည်ငါးပိများနှင့်ခြယ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောပန်းချီကားများကိုပြုပြင်ရန်အတွက်အကြံပြုသည်၊ သို့သော်၎င်းတို့တွင်ပါဝင်သည် acetone၎င်းတွင် acrylic သုတ်ဆေးနှင့်ပလတ်စတစ်ကိုယ်နှိုက်တွင်အလွန်တက်ကြွစွာအလုပ်လုပ်သည်။ သို့မှသာမော်ဒယ်တွင်အသုံးပြုသော fix fix သည်ဆေးသုတ်ခြင်းကိုဖျက်သိမ်းနိုင်သည်၊ အစွန်းအထင်းဖြစ်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းထဲသို့ထည့်သည့်အလုပ်အားလုံးကိုပျက်စီးစေသည်။ နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုမှာဤပြင်ဆင်မှုသည်အနည်းငယ်မျှသောတောက်ပသောအပေါ်ယံလွှာကိုပေးသည်။
ဘေဆစ် / မွှေးကြိုင်သောရွက်ကြွေလေး
ယေဘုယျအားဖြင့်မော်ဒယ်လ်အမြောက်အများသည်မြွေတာယာကိုပြုပြင်ခြင်းအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ ၎င်းကို DIY စတိုးဆိုင်များနှင့်ပလပ်စတစ်စတိုးဆိုင်များတွင်အလွယ်တကူရနိုင်သည်။ ၎င်း၏အနံ့မရှိသောဗားရှင်းသည်အခြားအရည်ပျော်ပစ္စည်းများကဲ့သို့နှာခေါင်းကိုအလှည့်မကျစေသည့်အားသာချက်ရှိသည်။
၎င်းသည်သဘာ ၀ coniferous resins မှရရှိသည်။ သို့သော်လည်း၊ turpentine အငွေ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိသောဖြစ်ကြသည် ကျန်းမာရေးအတွက်ထို့ကြောင့်လေ ၀ င်လေထွက်အခန်းများ (သို့) ပြတင်းပေါက်တစ်ခုဖြင့်အလုပ်လုပ်ပါ။ ၎င်းသည်ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်ကြာရှည်စွာရှူရှိုက်မိပါကအဆုတ်နှင့်အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့်မျက်စိများကိုပျက်စီးစေသည်။
အဆိုပါအရည်ပျော်ပစ္စည်းကိုယ်နှိုက်အတော်လေးဖြစ်ပါတယ် သိပ်သည်းလေးလံသောအဆီမျိုးဖြစ်သည် ခံစားချက်နဲ့။ အမှန်မှာ၎င်းကိုအဓိကအားဖြင့်ချောကျိကျိသော၊ ဆီဆေးသုတ်ဆေးများအတွက်အသုံးပြုသည်၊ "washဆီ.
၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်ရေငွေ့ပျံမှုပိုမိုကြာရှည်သောကြောင့်စိန်ပင်သည်၎င်းနှင့်စိမ်ထားသောခြယ်ပစ္စည်းများကိုသိသိသာသာချောမွေ့စေသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကိုဖုန်မှုန့်အဖြစ်အသုံးပြုခြင်းသည်သံချေးတက်ခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝတ်မှုန်၏အရောင်များကိုအနည်းငယ်မှေးမှိန်သွားစေနိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာနာမည်အောက်မှာဖြူသောဝိညာဉ်၊ သတ္တု turpentineparaffin မှရရှိသော။ ၎င်းသည်ယခင်နှင့်ဆန့်ကျင်။ ၎င်းသည်အလွန်ရှားပါးပြီးမတည်ငြိမ်သောကြောင့်၊ ချက်ချင်းအငွေ့ပျံနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကစုံတွဲများမှအထိခိုက်မခံသောလူတို့အဘို့သိသိသာသာပျော့ဖြစ်ပါတယ်။
Turpentine နှင့်အတူအရောင်ခြယ်မှုန်းမှုနိမ့်ကျသောအန္တရာယ်လည်းရှိပြီး၎င်းသည်အလွန်ပျော်ဝင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်၎င်းသည်ပိုမိုမြန်ဆန်သောအငွေ့ပျံစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဖြူရောင်ဝိညာဉ်၏အားနည်းချက်မှာခြယ်ပစ္စည်းအားအလွှာနှင့်ချိတ်ဆက်နိုင်ခြင်း၏စွမ်းအားဖြစ်သည်။ ကျနော့်အမြင်ထဲမှာပါ အဆိုပါခြယ်ပစ္စည်း fix ဖို့အကောင်းဆုံးအေးဂျင့် မော်ဒယ်ပေါ်မှာ။
ပေါ့ပါး / ထုတ်ယူသောဓာတ်ဆီ
ဓာတ်ဆီသည်အဖြူရောင်စိတ်ဓာတ်နှင့်တူညီသောဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးခိုင်မာသောအနံ့ရှိသည်။ လူကြိုက်များလွန်းသောကြောင့်ငါအချို့ဓာတ်ဆီအနံ့ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတယ်လို့ထင်တယ်၊ 😉၎င်း၏အကြီးမြတ်ဆုံးအားသာချက်မှာရရှိနိုင်မှု၊ အနီးဆုံးအသွားအလာဆိုင်ခန်းသို့သို့မဟုတ်ဓာတ်ဆီဆိုင်သို့သွားရန်ဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်ပိုမိုပေါ့ပါးသောဓာတ်ငွေ့များသည်သံဘူးများနှင့်ဆင်တူသည့်အထုပ်တစ်ထုပ်တွင် ၁၅၀ မှ ၂၅၀ မီလီမီတာစီစီရှိသည်။
ဟုတ်တယ်၊ unigruns ဟုခေါ်သည် acrylic resins ၏ရေဖြေရှင်းချက်များဖြစ်ပြီးဓာတုပစ္စည်းများနှင့်အတူသူတို့၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုတိုးတက်စေသည်။ ကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုး၏ကြံစည်မှုများသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဘာအောင်မြင်မည်ကိုအတိအကျပြောရန်ခက်ခဲသည်။ အပေါင်းဘက်၌, သင်ကျိန်းသေရှောက်သွားနိုင်ပါတယ် နာကျင်ကျိန်းစပ်ခြင်းမရှိနှင့်၎င်း၏အငွေ့အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ကြသည်။
အချို့လူများကအထူးသဖြင့်ဒိုင်ရာမစ်နှင့်ကမ်းခြေရှိမြေပြင်နှင့်အဆင်ပြေစွာနေထိုင်ခြင်းကိုနှစ်သက်ကြသည်။ ၎င်းသည် ၂-၃ နာရီခန့်ခြောက်သွေ့သွားသည်၊ ၎င်းသည်ကံမကောင်းအကြောင်းမလှ။ ခြယ်မှုန်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံပြီးနောက်မြေအောက်ခန်းတွင်သင့်တွင်အကြွင်းအကျန်အချို့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ ၏သင်တန်း, ပထမ ဦး ဆုံးအခြို့သောစမ်းသပ်မှုအတွက်, မမြင်ရတဲ့အရပျ၌။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်: ဓာတုဗေဒကြောင့်နှောင့်အယှက်မပေးနိုင်သည့်အရောင်ခြယ်ပစ္စည်းများကိုသူတို့၏သဘာဝပုံစံဖြင့်အမှန်တကယ်ကြည့်မည်။ ထိုအခါလျှောက်လွှာစဉ်အတွင်းရရှိသောအကျိုးသက်ရောက်မှုမည်သည့်လမ်းအတွက်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဒီတော့မင်းကမော်ဒယ်တစ်ခုကိုအရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုထဲမှာပိတ်ထားလို့ရတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ကက်ဘိနက်သေတ္တာတစ်ခုနောက်ကွယ်မှာရှိတယ် အနိမ့်ဆုံးမှဆိုးဆေးစောင့်ရှောက်လော့သူတို့ကို hyper-real ကြည့်ရှုစေခြင်း
Ps ချစ်သူမော်ဒယ်များ၊ မော်ဒယ်၊ ဒိုင်ယာရီ၊ မော်ဒယ်ပေါ်တွင်ခြယ်ဆေးကိုအသုံးပြုရန်သင်မကြာခဏအသုံးပြုသောအရာများကိုမှတ်ချက်ပေးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းပါသည်။ သင်၏ဆက်စပ်အတွေ့အကြုံများကိုဘာတွေလဲ, နှင့်သင်ယေဘုယျအားဖြင့်ခြယ်ပစ္စည်းနည်းစနစ်များအသုံးပြုရန်ဆန္ဒရှိခြင်းရှိမရှိ။ လူ့အမြင်ပါသောအရာအားလုံးကဲ့သို့ပင်
Mig ၏ ammo ရွှံ့ ညစ်ပတ်ပေရေ မော်ဒယ်ပေါ်ဖုန်မှုန့် ခြယ်ပစ္စည်း သံချေး vallejo ဆိုးဆေး ရာသီဥတု
ရှေ့သို့ ယခင် post: ခြောက်သွေ့သောငါးပိများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောခြယ်ပစ္စည်း
နောက်တစ်ခု: နောက်တစ်ခု ပြခန်း: US M41 Walker Bulldog - 1/35 Tamiya
ငါဆေးကြောသန့်စင်ရန်အတွက်ဓာတ်ငွေ့ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ဒဏ်မှထွက်လာသည်။ သို့သော်ခြောက်သွေ့သောအစက်အပြောက်များဖြစ်သည့်မြေမှုန့်နှင့်ဖုန်ကဲ့သို့ခြောက်သွေ့မှုမရှိခြင်း၊ အနုပညာခြယ်မှုန့်များသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ , ထိုသူတို့အများကြီးရှိပါတယ်နှင့်ရောနှောခံရမည်ကိုကွောကျရှံ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, အများဆုံးသူထုတ်ပစ်မည်နှင့် 50 ထဲကတစ်ဂရမ်ကိုထိခိုက်ပါဘူး။
Star Wormwood သူကရေးသားခဲ့သည်:
ငါဒီ motif ကို turpentine နဲ့ပြုပြင်တာတွေလုပ်ခဲ့ဖူးပေမယ့်အရင်ကပြင်ဆင်ထားတဲ့ plexiglass plate ပေါ်မှာသတိကြီးစွာနဲ့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ထရိုင်ပင်အပင်သည် sidolux အလွှာ၊ ရှင်းလင်းသောအရောင်တင်ဆီ၊ ဆေးသုတ်ဆေး (Pactra acrylics) နှစ်လွှာကိုအဆက်မပြတ်ထိုးဖောက်။ လှပသောအက်ကြောင်းများကွန်ယက်ကိုဖန်တီးသည်။
ယခင်ဆောင်းပါးမှ pastel ခြယ်ပစ္စည်းများကို Flying Tiger စတိုးမှ PLN4အတွက်ကော်နှင့်ရောစပ်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်ရွှံ့နွံများရခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ဖော်ပြချက်တွင် "ရေအခြေခံသော" နှင့် "ခြောက်သွေ့ပြီးနောက်ပွင့်လင်းမြင်သာသော" သူမည်သူမဆိုလုပ်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ငါခြယ်ပစ္စည်းအချို့ကိုပုလင်း ဦး ထုပ်ထဲထည့်လိုက်တယ်၊ ဆေးဘူးနဲ့စတစ်စတစ်ကော်ကိုညှစ်လိုက်ပြီးရောလိုက်တယ်။ ငါရရှိသောတုတ်ကိုစမ်းသပ်ပန်းကန် (ယခင်ကကဲ့သို့တူညီသောအနုတ် sidolux သည်။ ၎င်းသည်ပြီးဆုံးသွားသော်လည်းဆံပင်ဖြူအပေါ် အခြေခံ၍ ဆောင်းရာသီပြောက်ကျားအလွှာဖြင့်) အနည်းငယ်ကိုပွတ်တိုက်။ အနည်းငယ်“ ပွတ်တိုက်ခြင်း” ဖြင့်လိမ်းခဲ့သည်။ မင်္ဂလာပါ။
သုံးရက်မြောက်သောနေ့တွင်ကျွန်တော်ဆိုးကျိုးများမတွေ့ရပါ။ ဆေးသုတ်နေဆဲသည်စုံလင်နေဆဲဖြစ်ပြီးရွှံ့များသည်ခဲယဉ်းပြီးရွေ့လျားရန်ခက်ခဲသည်။ ထို့ကြောင့်သန့်ရှင်းရေးလုပ်စဉ်မော်ဒယ်ကိုရှုပ်စေသောကြောင့်၎င်းသည်ပြတ်တောက်သွားခြင်းမဟုတ်ပါ။ စိုစွတ်သောရွှံ့များကိုရရှိရန်အတွက်၎င်းသည်လေကို တိုက်၍ ပက်ဖြန်းနိုင်သည်ဖြစ်သော်လည်းရောစပ်ထားသောအရာဝတ္ထုတွင် Pactra အရောင်တင်ဆီထည့်သည်။
ထို့ကြောင့်တစ်စုံတစ်ယောက်သည်ရွှံ့ဖြင့်စတင်စွန့်စားလိုပါကမော်ဒယ်များပေါ်တွင်မော်တာများ၊ အဖြူရောင်စိတ်နှင့် turpentine တို့၏ရေဝဲသို့မချမီငါထိုကဲ့သို့သောရိုးရှင်းသောဖွဲ့စည်းမှုကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့အကြံပြုနိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဆီမှာရေသုတ်ဆေးတွေဘယ်လိုသူတို့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာမသိသေးဘူး၊ ဒါပေမယ့်အားနည်းတဲ့ acrylics တွေကပ်ပြီး Humbrole ကလုပ်သင့်တယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ, ငါ Revell ကနေ 1/72 အတွက်ငါ့လက်ရှိစီမံကိန်း, တနည်း Nashorn, ဒီမူပိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသွားလိမ့်မယ်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်အထက်ပါမူပိုင်ခွင့်ကိုအသုံးပြုပြီး, သူ့အဘို့အချို့သောရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ diorama ရဖို့ကြိုးစားပါ။
ကောင်းမွန်သောအနှစ်ချုပ်၊ ကျွန်ုပ်အမြင်ကိုကောင်းစွာစနစ်တကျစီစဉ်ထားပြီးပါပြီ။ Nanisice သည်ဥပမာ WS aero နှင့်အတူလား။